Ungayisebenzisa kanjani imiphumela emisha yemilayezo ku-iOS 10 (II) | Ngivela kwa-mac
Ungayisebenzisa kanjani imiphumela emisha yemilayezo ku-iOS 10 (II)
Njengoba sivele siveze engxenyeni yokuqala yalesi sifundo, Imilayezo ku-iOS Inemiphumela eminingi emisha eyenza izingxoxo zethu zicebe kakhulu futhi zibe mnandi.
Esihlokweni esandulele, sithole ukuthi yimiphi imiphumela ye-bubble nemiphumela yesikrini esigcwele, nokuthi singayisebenzisa kanjani ngayinye yazo. Kodwa-ke, sigcina umphumela wokugcina nemfihlo ethile. Kepha ungakhathazeki! Sizokutshela ngakho ngezansi.
1 Imilayezo ene-iOS 10, umuzwa omuhle
1.1 Ukuphendula imilayezo esiyitholayo
1.1.1 Ungawuphendula kanjani umlayezo nge-Tapback:
1.2 Izinkinga zokusebenzisa imiphumela yoMlayezo ku-iOS 10?
Imilayezo ene-iOS 10, umuzwa omuhle
Kumelwe ngivume ukuthi, yize ukwethulwa kweMilayezo ngoJuni kwabonakala kukude ngokweqile futhi kuhamba kancane, izindaba zingithokozisile futhi manje ngiyathanda ukusebenzisa uhlelo lokusebenza lwendabuko ukuxhumana nabangane bami.
Ku ingxenye yokuqala yalesi sihloko Sesiqedile ngemiphumela yesikrini esigcwele semilayezo ku-iOS 10 kodwa, kunemininingwane engiyigcinele manje futhi ongayithanda nakanjani.
I-Los imiphumela yesikrini esigcwele zingangezwa kwimilayezo ngesandla ngokulandela imiyalo engenhla. Kepha kubuye kube nomphumela ozenzakalelayo ocushiwe ngemishwana ethile. Isibonelo, uma umngane ebhala umbhalo othi "usuku lokuzalwa oluhle", umyalezo wakhe uzothunyelwa ngamabhaluni. Uma uthumela umbhalo othi "Siyakuhalalisela", uzobe uhambisana ne-confetti.
Futhi manje njengoba sengikutshele konke ngemiphumela ye-bubble nemiphumela yesikrini esigcwele, ake sifinyelele "ekuphenduleni".
Ukuphendula imilayezo esiyitholayo
Kwesinye isikhathi awudingi ukuthumela umyalezo omusha ukutshela oxhumana naye ukuthi yini oyithandayo, isibonelo.
Ukubuyela emuva isici esisha semilayezo ku-iOS 10 esengeza isithonjana esincane kunoma yimuphi umlayezo owutholile (imibhalo, izithombe, amafayela we-GIF, nokuningi). Kuyinto efana ne- «impendulo» leyo isivumela ukuthi sidlulise ukusabela ngaphandle kokubhala umyalezo ophelele.
Izithonjana ze-tapback, uma zisetshenziswa, ziyangezwa kubhamuza yengxoxo ebikhethiwe futhi ebonakalayo kuwe nakumamukeli womyalezo.
Lokhu kufaka phakathi inhliziyo, isithupha phezulu nesithupha phansi isandla, isithonjana se- "haha", indawo yokubabaza, kanye nophawu lombuzo. Uphawu ngalunye lumelela umuzwa ohlukile noma impendulo, edluliswa ngesithonjana.
Usebenzisa impendulo ye-Heart Tapback uveza ukuthi uyawuthanda lowo mlayezo. Isamukeli sakho sizobona isithonjana kodwa sizophinda sithole nesaziso esithi "uJose wasithanda ...".
Ungawuphendula kanjani umlayezo nge-Tapback:
Gcina umunwe wakho kubhamuza lomyalezo ofuna ukudlulisa ukusabela kwakho kuwo.
Izithonjana ezitholakalayo zizovela "ezintantayo".
Khetha isithonjana ofuna ukuphendula ngaso
Isithonjana sizonamathiselwa kubhamuza wengxoxo futhi sizothunyelwa kumamukeli womyalezo ngokuzenzekelayo ngaphandle kokwenza okunye.
Uma okufunayo shintsha noma susa ukusabela kwakho kumyalezo, mane ucindezele uphinde ubambe lowo myalezo futhi ukhansele ukukhetha okwenzile ngokucindezela isithonjana esifanayo njengakuqala.
Izinkinga zokusebenzisa imiphumela yoMlayezo ku-iOS 10?
Uma uhlangabezana nezinkinga uma kukhulunywa ngokusebenzisa imiphumela ye-bubble, imiphumela yesikrini esigcwele, ngisho nale tapcack ebesikhuluma ngayo, kufanele cisha umsebenzi we-«Nciphisa ukunyakaza».
Ukuze wenze lokhu, vula uhlelo lokusebenza lwe-Izilungiselelo bese ulandela Okujwayelekile -> Ukufinyeleleka -> Nciphisa umzila wokuhamba. Kufanele uqiniseke ukuthi lesi sici sicishiwe.
Uma i- "Reduce Motion" inikwe amandla, imiphumela yesikrini nemiphumela ye-bubble ayikwazi ukusebenza ku-iOS 10. Incazelo ilula kakhulu. Yomibili le miphumela incike ekunyakazeni ngakho-ke, ngokunciphisa ukunyakaza sizobe sesiyivimbile.
Khumbula ukuthi yonke le miphumela ikhonjiswa kuphela nge-iOS 10 ne-MacOS Sierra. Futhi uma ufuna ukuqhubeka nokuthola i-iOS 10:
Ungayisebenzisa kanjani i-new iOS 10 lock screen (I)
Ungayisebenzisa kanjani imiphumela emisha yemilayezo ku-iOS 10 (I)
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungayisebenzisa kanjani imiphumela emisha yemilayezo ku-iOS 10 (II)
Le Inkinobho Yasekhaya ye-iPhone 7 ne-7 plus. Nge-3D Touch